Soomaaliya Billado Dahab Ah kasoo hooysay Tartan Caalami Ah %
Soomaaliya Billado Dahab Ah kasoo hooysay Tartan Caalami Ah
By Ramzi Yare	 Last updated Mar 16, 2019
Ciyaartoyda Xulka qaranka Cayaaraha Fudud ayaa guul taariikhi ah kasoo hoyay tartan cayaaraha Fudud oo dalka Djibouti lagu qabtay, waxayna kala soo hoyden laba biladood oo dahab ah iyo kaalimo kale oo wanaagsan.
Cabdullaahi Jaamac Maxamed oo orodka1500 mtr ee dhanka da’yarta u tartamayay ayaa kaalinta koowaad isna ku dhamaystay kadib markii ku orday 3:46 :78 waxuuna sidaaasi ku hantay Biladda dahabka.
Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Orodka da’yarta 3,000mtr ka qayb galay ayaa bandhigiisa aad u wanaagsanaa waxuu soo galay kaalinta afaraard kadib markii uu ku orday 8:36. isgaoo ku dhawaad inuu biladda maarta hanto.
Cali Iidow Xasan oo qaybta ciyaartoyda waa weynka ku jiray ayaa kua dhamaystay kaalinta 7-aad ee tartanka qaybtiisa 1500mtr waxuuna ku orday 3:49 taasoo ahayd Saacad wanaagsan.
Kulamada laga cayaarao 5-horyaal ee Qaarada Yurub iyo waqtiga ay soo galayaan
Isku aadka wareegga sideed dhamaadka dhmaadka ee UEFA Europa League la soo saaray